Turkiga oo xirey haweeney la dhalatay al-Baqdaaddi
Ciidamada Turkiga ee ku sugan waqooyiga Siiriya ayaa soo xirey haweeney la dhalatay hoggaamiyihii kooxda ISIS Abuubakar Al Baqdaaddi, kaas oo dhawaantan lagu dilay howl gal uu hoggaaminayay Mareykanka.
Sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga oo magaciisa qariyay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegey in ciidamadooda ay soo qabteen gabadhaa la dhalatay Baqdaadi, kadib howl gal ka dhacay meel u dhow magaalada Azaz ee waqooyiga Siiriya.
Haweeneydaasi magaceeda ayaa lagu sheegey Rasmiya Awad, waxana la tilmaamay inay dhalatay 1954-tii.
Waxa lala soo xirey seygeeda, gabadh ay soddoh u tahay iyo shan caruur ah. Sarkaalka ayaa sheegey in seddex ruux oo qaan gaar ah hadda la wareysan doono, si looga helo xogo ku saabsan kooxda ISIS.
Magaalada Azaz, ayaa waxa maamula ciidamada Turkiga tan iyo sanadkii 2016, markaas oo ay ciidanku weerar ku qaadeen aaggaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa ku dhawaaqay 27-kii October in ay ciidamada Mareykanka howl gal ku dileen hoggaamiyihii kooxda ISIS, Al Baqdaaddi. Howl-galkaasi oo ay ganac ka geysteen ciidamada Kurdiyiinta ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Idlib ee dalka Siiriya.